Fetiben’ny Bilaogy: Meksika – Midradradràdra Ny Herisetra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Aogositra 2011 14:56 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, polski, عربي, Español
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny tatitray manokana momba ny Adin'ny Meksika amin'ny Zava-mahadomelina.
Taorian'ny famakiana ireo bilaogy 36 nandray anjara tamin'ny Fetiben'ny Bilaogy: Meksika – Vahoaka, Herisetra ary Bilaogy dia nisy fisalasalàna kely ihany na teo aza ireo rehetra nosoratana, nanehoan-kevitra ary nohalalinina mikasika ny herisetra ao Meksika; mbola betsaka ihany no tokony holazaina. Amin'ny famoahana ny fomba fijerin'izy ireo manokana ny herisetra, be ny niady momba ny teny enti-milaza azy io. Fanazarantena iray ny fandroahana devoly, ny fomba fitantànana azy ary ny fanovàna ny herisetra. Amin'ny fanaovana izany, ny antenaina dia ny mba hanapaka ny kiboribory mitsingerina tsy hiitatra hatrany amin'ny taranaka ho avy. Io dia tsy hiteraka fotsiny fandàvana sy hetsi-panoherana, fa dingana ihany koa hisorohana ny herisetra mety hiseho. Tsy tsiambaratelo izany: tsy ho leferina ny herisetra; tsy ho avela hanjaka moramora foana izany.
Atombotsika amin'ny “A Shout of Pain” (Hiakam-pangirifiriana) [es] avy amin'i Ana Lilia Rodríguez Olvera tao amin'ny bilaoginy Poeterno (en honor al arte) ny fantina lahatsoratra nalefa ho amin'ilay Fetibe. Mampahafantatra antsika izy hoe: ” Ity lahatsoratra manaraka ity dia nosoratana ho toy ny hiakan'ny very fanantenana ary miaty ny hatezerana mivaivay avy amiko ho an'ireo nanafika ny raibeko:
Raha misy amintsika mandà tsy hamela heloka tamin'ireo zavatra nitranga tato ho ato, ny sasany amintsika kosa mandà ny hanadino azy ireny. Ity no lazaina antsika [es] ao amin'ny bilaogy Papás DF an'i Diana Medina màka ohatra amin'ireo zavatra nitranga tato ho ato, ary amin'ny fiteniny: “Efa lany andro sahady ilay vaovao. Ny vaovao dia vao tamin'ny herinandro lasa ary ho an'ny vaninandro maoderina, ny vaovao izay nitranga ora iray teo aloha dia sokajiana ho ‘vaovao tranainy be’ ao amin'ny Twitter, izay nitranga tamin'ny 3 May dia efa lavitry ny fahatsapantsika. Noho izay antony izay no anoratako. Amin'izay tsy adiontsika io tranga io”
i Daniela Pérez Michel dia mandalina [es] ao amin'ny bilaoginy La Trinchera, miresaka koa ny amin'ny fanadinoana. Tsy niniana ny resaka fanadinoana tao amin'ny bilaoginy; fa noterena:
Leonor Reyes Pavón ao amin'ny bilaogy El Gallinero Revuelto dia manoratra [es] mikasika ny herisetra isanandro sy ny fiantraikan'ireo sarinà herisetra, na eo aza ny hoe ny mpanoratra dia monina any amin'ny faritra tsy dia niharan'izany loatra miohatra amin'ny faritra hafa eo amin'ny firenena:
Ernesto Priego ao amin'ny #SinLugar, dia somary nandeha lavidavitra kokoa ary niteny mikasika ny fivezivezen'ny fitaovam-piadiana sy ny zava-mahadomelina [es], izay loharanon-kerisetra hatramin'izay:
El Grupo de Información en Reproducción Elegida AC (GIRE), na ny Vondrom-pampahalalam-baovaon'ny Repoblika, dia mitondra [es] endrika hafan'ny herisetra ho antsika, izay mampitondra faisana ny vehivavy :
Ny vehivavy eto amin'ity firenena ity dia iharan'ny herisetra satria fotsiny hoe vehivavy. Ny Lalàna Ankapobeny Hahafahan'ny Vehivavy Hànana Fiainana Lavitry ny Herisetra dia mamaritra ny herisetra ho toy ny “na inona na inona fihetsika na fanimbazimbana, mifototra amin'ny maha-vehivavy azy, izay mety hiteraka fahavoazana sy / na fangirifiriana ara-tsaina, ara-nofo,, ara-toekarena na ara-pananahana, tafiditra amin'izany koa ny fahafatesana, na eo anivon'ny ankohonana io na anivon'ny fiarahamonina”